Hoyga Saida Sheikh
Maan faneed, saadaal saxafi, fogaan arag hal-abuur iyo qalin awood leh.... Ku soo dhawaada dhanbal dhigta minanka Saida Sheikh Ahmed. Minanka, minankiinna waaye, ha is martiyeeynina, gaxwo caba, buskud iyo xawlo cuna cabbaar aan idiin sheekeyhaa war waa iga buxaa asoo beeso la'aan ah aad ka dhargeysiin haddaad iga gurtaan tartiibtiinna wax lee iga baraheysiin waa la hubaa.. Abbaay Sitiyeey na furo.
Isha midig illin baa soo dareertay, qosol yarna waa aan raaciyay. Sababta ay isha midig kaliya ilmada uga daadatay malaa waxaan u jiifay dhanka midig, moogi.
Waxa kaliya ee illin iyo qosol isku kay raacinaya waa heesta ii daaran, waa "beer-qaad" waxbaan xusuusanayaa, mararka qaar sida qof kasta oo Soomaali ah ayaan anna is maahiyaa, waxaan is maahin darteed heestaa anigoo og in aysan ahayn laba qof oo is jecel aan in badan u sawirtay labada is jecel, waa jacayl mase ahan laba qof. Adna adiga oo ogsoon waad is maahineysaa. Maya, waa ka si kale, waanse u bareeray inaan sawirkaa iska saarto.
Waxaan xusuustay waagii aan aniga iyo adigaba sidaa u sawirannay, oo aan jacaylkeenna ku dabbaqeynay, waxaan xusuustay waagii aan beerkayga inta kugu idhi soo seexo aad adigoo culeyskaaga oo dhan dhimaya si aanan xanuun u dareemin ama aad ii cusleyn aan halabuurnay ciyaartii aan u bixinnay «beerqaad» ma ahayn mid ku saabsan dareen sariireed, waxayse ahayd beer wadaag iyo jacayl isu muujin iyo kalgacayl iwm
"Wuu Dhintay ku Dheh"
"Manaa leey diloo dartaa deebna oo leeygu daaree
kuma deyn karee adaa daawadeeydii eheedee."
Heestaas ayaa dhegaha noogu jirta labadeennaba, qof walbaa hal dheg, hal dheg na waa inoo bannaanka iyo dhaqdhaqaaqyada. Waxaan joognaa jardiino aad loo qurxiyay oo nafta lagu nasiyo. Si kedis ah ayaan u maqlayaa anigu af Soomaali, waa u dheg raaricinayaa, mise waaba qof aan aad iyo aad asxaab u nahay; wuxuu ku hadlayaa aleenkiisa gacanta ama mobilekiisa, waxaa uu ku cel celinayaa: waa hagaag, aniga ayaa war idinka soo siin doona. Ka dibna aamiin, aamiin ayuu leeyahay. Markii uu dhigay ayaa uu na salaamay, is wareysiga guud ka dib waxa uu inta is heyn kari waayay i leeyahay: halka la iga soo wacay Hargeysa ayaa ay ahaydoo inan/wiil aanu isku reer nahay oo magaaladan deggan ayaa ay waalidkii i wareysanayaan oo muddo warkiisi may helin.
Haye, ayaan ku celiyay, waa aan ka koobinayaa warka. Wuu sii watayoo wuxuu leeyahay: inanku waa inan/wiil aad wax u bartay oo iminka xafiis weyn buu ka shaqeeyaa oo 15000 Euros ayuu bishii qaataa. Waxaan la soo booday: oo haddii uu intaasoo beeso ah qaato maxaa uu waalidkii u jarayaa ma dhowr boqol oo dollar ayuu u waayay? "Maya uma waayin, waana deeqsi ee mar Alla marka uu waco ayaa ay ku leeyihiin 'maad guursatid oo gabar la timaadid ama ha laguu dhisee aad soo sheegtid. Mise wararka lagaa sheegayaa waxbaa ka jira?'
Jacayl waa Jacayl
Sidii caadada ahayd waxaan dhageysanayaa heesihi riwaayaddii caan baxday ee “Kibirkii Beertaa Karfan Saaray Jacaylka” Riwaayadda siduu Abwaanka Laashin Gaashaan iigu sheegay waxay toos u taabanaysaa dulmi badan oo ay dadka beeraleyda Koonfurta Soomaaliya (Xamar inta ka koonfureeysa” ku haysay dawladdii kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre. Dulmiga meel kasta wuu gaaray waa isla og nahay oo halkan ku sharraxi mayno haddeer. Gobollada kale ee dalka wixii gaarayna waa la isla wada og yahay.
Riwaayaddaas dulmi, caro iyo ciil dawlad ay gaysanayso bay ka warrantaa balse ma ogiyee markaan dhageysanayo si bay maankayga u xanxanteysaa, wax baan qoraa, waxbaan tabaa, wax baan xusuustaa, waxbaan is weydiiyaa, dal burburay baan xusuustaa, dad burburay baan is weydiiyaa. Weydiimo la i weydiiyo sanado badan ka hor ama maalmo ka hor ayaan ka fekeraa, wax baan isku geegeeyaa.
Beri baa jirtay ay dad badan is weydiin jireen: dadkii Soomaalida ahaa ee la yaqaannay intee ku danbeeyeen ama reer magaalkii intee qabteen? Qaar baa dhihi jiray badankood waa xijaabteen, qaar baa odhan jiray waa la laayay, qaar baa yidhaahdey Torontey joogaan, qaar kalaa yiraah London malaha, aduu meel lagu sheego la waa. Somaliland baan eegayoo iyana isweydiintaa way jirtay.
Maalmahan waxaa cusub waxaan arkaa dad yaabban oo yiraahda Soomalida maanta amay yihiin dadyow kale oo af Somaaliga lasoo baray? Aqoondarrada ka haysata dal iyo dad awgeed. Malahaa Waa Oromo qaar baa leh, qaar kalaa leh dalalka deriska un dheh. Dooddaas waa taagnayd ogaantey. Waxa keenayna waa wax badan iyo dad badan oo lala yaabaa Soomaalidan lagu arkaa.....
Dadka ka soo firxaday geyiga Soomaalida ee ku nool dalalka Yurub waxa ay ila garanayaan hal arrin oo dhammaan si weyn loogu wada faraxsan yahay lagana simman yahay oo aanan ku jirin dhammaan inta kalee dhaliilaha badan laga sheego dhinacyada inta badan laga gil gishana aan ku jirin taasoo ah: in Booliska (Police) iyo Mileteriga dalalka aanu maanta iyo martida u nahay ay sugayaan amnigeenna marka laga reebo mar mar ay dhacdo balaayo cirka ka soo dhacda ah oo aan lagu tashan.
Waxaanu ku wada hurudnaa askartaas oo aan amnigeenna Ilaahay ka sokoow ku aaminnay, qof kastaana si nabad ah ayuu ugu niyad xasilloon yahay. Ma dhacdo inaan dhibaatooyin kala kulanno isla iyaga, qof walbaa halkuu doono ha ka yimaadee waa loo simman yahay sharciga hortiisa oo ay ugu horreyso in loo ballan qaaday qof walbaa nabad iyo amni sugan.
Wiil Marka Caddeey
Deeqda Ilaahay waa hadyad gaar ah uu kuu garto, suuqa lagama iibsado, xoogna laguma helo iyo indho caddeys, edebta iyo xishoodka, ixtiraamka bulsho, hab nololeedka iyo dad la dhaqanka wanaagsanna waa Alle ku sii iyo dedaal uu qofku gaaro, qaybna waa ay ka tahay barbaarinta waalidka-san iyo ku dhex noolaanta bulsho caafimaad qabta.
Haddaan leeyahay hiddo gaar ah iyo dhaqan umadda ka tilmaaman iyo taariikh ma guuraan ah oo caalamku isla qirayo. Hadduu deeqda Ilaahay ila soo doontay anna aan dedaal ku daray, ma garan karo wax aan ahayn inaan farxad ku noolaan karo.
Ma ogi meel ama si aan isku ciil kaambiyo iyo si aan nolosha ula colloobo.
Habeenkiina waxaan ku hurdaa anigoo xusuusan taariikhdi labadeydii boqortooyo ee Waaq-dhoobeey iyo Waamo. Sidoo kale ka qayb galkeygii gobonnimo doonkii iyo gummaysi-diidkii kaalintii ka dhex iftay dunida ee aan lahaa ee maanta meel kasta ku qoran.
Baastada Dalka Ma Cunno
Waxaan nahay dhallinyaro oo waan isku xig xignaa, da' ahaan, oo ugu badnaan hal illaa laba sano ayaa noo dhaxeysa. Waanu kibirsan nahay oo sanka iyo gafuurka ayaan kor u taageynaa, oo reerka ayaa iska dhaqnaa, oo wali nalooma waayin waxaan saddexda wakhti cuni lahayn, kama fikirno wax kale iyo nolol kale toona, ma ogin, mana xusuusnin, xaafadaha baan ku eg nahay, dalka gudihiisa guud ahaan, gobolladiisa, taariikhdiisa iyo wax Allaale iyo wuxuu yahay maba naqaanno. Waxaa markii aan yar yarayn dugsiga hoose nala ku bari jiray un heeso iskuulka na lagu xafidsiiyo oo koox maamulka markaa haysta sida in jannada lagu galaayo na loo baro oo loo heeso. Wadanniyadda inta aan ka naqaan baaba kooban oo waxa kaliya barashadi waddaniyada lagu baddalay inaan wax un amaanno, oo faaninno, oo u sacab tunno. Ma naqaan wax intaas dhaafsiisan. Dadku wuu ku wada nool yahay magaalada haddana kuma wada noola.
Dugsiga sare naftiisa wax nala baro ayaa iska yar oo macallimiinta oo laba laba u haasaawaya ayaan u dheg taagnaa oo waxaan hadba dhagahayna ku soo dhacaya labadaas macallin hebel iyo heblaayo waa isku haayaan (way haasaawayaan) Maxaanuba barannaa? Iyagaa isku mashquulsanaa kuwii wax na bari lahaayee.
Udugga hawada macaanteeda ayaa dadkii oo dhan ay ku raaxeysanayaan. Waa inta aysan urin oo ay qurmin oo uusan dhiiggu ku daadan. Waxaa baxeysa neecaaw markii uu sanku qaato niyadda ay ku dagayso, jirkuna ku iftiimaayo. Farxad badan oo cid u joogtay ma ahee aanan hadal lagu cabbiri karin. Neecaawdaas waa ta ku reebta qof hilowga uu u qaado deegaan, magaalo iyo dal. Waa ta kugu reebta xusuusaha lama illaawaan oo kugu rakibta dhalashada ka sokoow magaaladaas. Haddaad ka fogaato waa ta kugu xanbaarta feker dheer iyo dib u milicsi iyo waayo soo noqoshadooda uu shaki ku jiro.
Waan layrsanayay. Waxaan taagnaa irridka gurigayga, oo saarnaa jid weyn, oo markii aysan mareyn baabbuur badan aad uga jeeddo dhammaan irdaha guryaha jidkaa saran iyo ciddii mareysa. Waxaad si fiican ula socotaa dhaq dhaqaaqyada xaafadda. Baararka dhanka gurigaygu ku yaallay ka soo hor jeedkiisa, ee jidkaa saarnaa waxaa wada fadhiyay dad wajiyadoodu ay wada nuurayaan. Waxaa lagu cabbaayaa cabitaanno kala duwan. Qaar baa Turub ciyaaraya. Qaarna jaas. Qaarna Dhaadhuu/Laadhuu. Ma ahan dadku dad ku jiho wareersan siyaasad, baashaalkooda ayaa baxayaa. Qaar kalaa iyagana fadhiyay darbiyo sida kuraas u dhisan oo ku teedsan jidkaa weyn oo laba laba u fadhiya oo iska sheekeysanaya. Jawi aan faallaadiisa la koobi karin baa lagu wada jiray. Heeso ka daaran baararka ayaa dhan kastaa qurxinaya dhammaan inta u dhow dhow baararka iyo jidkaba.
“Jeebkaaga aan kuugu jiraa, ma kaa jeedsahaayee, jar ka boodka dhaaf, Jacayl adduunyo minaas jiraayee, jiinbaar ku soo joogso, ad jannaadsadeey isii, hoobbala isii” Heesta Jannaay, Laashim Axmadeey Cabdi Gaashaan ayaa dananaysa oo ku dhacaysa meel hoose oo fog.
Maalintii koowaad ee Dhuuxo ay soo gashay guri ay Soomaaliba ka muuqato muddo sanado ah kaddib, waxa ay ahayd maalin iyadoo sidda waraaqo ku dhex jiray gal ay dusha kaga qoran tahay “is-dhiibe cusub” oo ay gurigaasi keentay. Waxa ay kasoo qaadday dukaamada ganacsi ee isgaarsiinta ee Internetka laga adeegsado ama Teleefoonka laga dirsado, oo uu wiil yar oo isla maalintaa is-dhiibay (Dalbaday in loo qaabilo qaxooti ahaan) ku soo illoobay goobtaas, intuu ka dirsaday teleefon. Nasiib wanaagiiyee, qolkii yaraa ee uu wiilku ka dirsaday teleefonka waxa ay Dhuuxo ahayd qofkii ku xigay ee galay. Markii ay aqoonsatay in uu magaca wiilku yahay Soomaali, oo dhalashadiisuna tahay Soomaali, bay galkii u qaadday gurigaas, oo ay keentay maadaama guriga lagu yaqaannay in ay deggan yihiin gebi ahaantiisba dad Soomaaliyeed. Waa ayna iska tagtay. Gurigii ay Soomaalidu degganaayeen, qaar ka mid ah dadkii guriga ku noolaa baa markiiba is weydiin billaabay, oo qaar baa ceeb u arka in aysan warbixinta dadka ku nool magaalada oo dhan aysan heynin, oo isu arka shaqo weyn oo muhiim ah oo aynaan cidi u dirsan se iyagaa isu diray in ay hayaan. Markaa, sidaaba ha ahaatee, waxaa ay aad u jecel yihiin in ay warbixintu ahaato mid u badan xagga ceebeynta iyo wax xun sheegga. Lama warsado waxa ka soo gala waase loo riyaaqaa.
Dhuuxo xilka ay iska saartay in ay badbaadiso isdhiibaha cusub oo ay galkiisii u soo hesho iyadoo ogsoon haddii ay ka lumaan waraaqahaas in uu aayatiinkiisa gali karo mugdi, oo waraaqaha danbe ay u fududaan doonin, qofka markiiba uu codsado qaxootinnimada haddii ay kolkaaba ka dhummaan sida caadiga ah ay dhacdo in ay sanad iyo ka badan ku qaadato in uu dib u helo isla waraaqihii. Loogama mahadcelin ee waxaa markiiba la billaabay in la yiraahdo
Maskaxdii Cammirnayd ee Maxamed Muxyadiin Cali
Riix masawirka oo soo arag wax qabadkeyga
Buugaagta iyo gorfeynta:
''Is-dhiib -Hilinnadii cadaabta'' Hawd
"Aanadii Negeeye" Sheeko dareen hoose leh. Jama Musse
Roge falanqayn: Halgammo isriixaya, dad iyo duunyo nolol doon ah! Ayaan M.
LADH – buug yaab leh "Hawd"
Qalinleyda iyo Qormooyinka aan jeclahay
Qalinka Ibraahin Hawd
Warqaddii Gabowday Gabowday Gabowday
Dookhu waa balaayo
Waxa ay ii bixiyeen Waxshi
Qaybintii nafsadeed ee Soomaalida
Soo booqo guryahaan qurxoon:
Cartoon of Abdul Arts
Gaarriye - The world of Somali literature
Abwaanka iyo Qoraaga
Ku war wareeg guryahaan kalena:
halkanna waad igula saaxiibi kartaan
Isoo raac aan ku raacee
Qoraallada iyo xogta waxaa leh Saida Sheikh Inta kale qof walbaa magaciisa ayaa ku qoran. 2007-2013. Simple theme. Powered by Blogger.